Talooyin fiicfiican si aad iPhone 7 / iPhone 7s sida ugu fiican ee New
iPhone 6s (Plus) / macruufka 9
1.6 Secrets ee iPhone 6s (Plus)
2 iPhone 6s (Plus) Talooyinka
2.1 Hayso iPhone 6s (Plus) Fast
2.6 Transfer Data si iPhone 6s (Plus)
2.7 iPhone 6s (Plus) VS Samsung Galaxy qod6 Edge
Talooyin fiican in ay 6s iPhone Your (Plus) sida ugu fiican ee New
Mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee isticmaala iPhone wajihi waa Gaabinta hoos u of software ah. Tani dhab ahaantii waa dhibaato dhab ahaantii caadi. Yaabaa in aad dareentay in aad iPhone helo gaabis iyo gaabis ah sida aad u isticmaali. Waxaa jira sababo dhowr ah, laakiin waxa soo socda oo ah kuwa ugu badan yihiin;
Xusuustiisu buuxin kartaa inay keento qalabka si gaabis ah u ordaan marka xusuusta falalka degdeg ah
Rakiban software dheeraad ah wuxuu sababi karaa in aad iPhone si aad yarayso
Muddo aad iPhone bilaaban karo si ay u dareemaan gaabis badan sida caadiga ah gaar ahaan marka la barbar dhigo daydo cusub.
Sabab kasta, waxaa jira dhowr siyood oo aad u fiican sida cusub haysan kartid iPhone ayaa qaab ciyaareed. Bal aynu eegno qaar ka mid ah kuwa ugu waxtarka badan.
Chine 1. Down Close Non-daruuriga ah
Kani waa xalka ugu fudud oo si dhab ah u shaqeyn doono si ay dadajiso aad iPhone . Waxaad ku samayn kartaa adigoo double dhag siinaya batoonka Home ah inay soo qaadaan Apps hadda socda. Waxaad markaa kor mari inay iyaga la xiro.
Dhibaatada kaliya la habkan waa in aysan jirin hab in ay xirto dhan oo iyaga ka mid. Sidaa darteed, waa inaad diyaar u waqti arrin waxan u samaynaysaan gaar ahaan haddii aad leedahay wax badan oo Chine.
2. Isticmaal Doctor Battery ka App in ♦ Dib Memory
The Battery Doctor App kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan in ay Yididiilo One Tubada inay dib u qoondaysaa Memory iyo dadajiso aad iPhone. Halkan sida loo sameeyo.
Marka aad soo bixi app ah, waxaad ku rakibi karaa "Mid ka mid ah Yididiilo Tubada" feature gudaha ka app. Just guji "gantaal" icon ee geeska sare.
Ku rakib Yididiilo One tuubada ka dibna riix si aad u ha shaqeeyo ay sixir.
Waxaa markaas dib u qoondaysaa doonaa xusuusta iyo aad iPhone dhakhso.
Dhibaatada kaliya la doorashooyinkan waa in aysan jirin sharaxaad cut cad waxa App dhab sameeya si ay u dardar iPhone. Waxa kale oo jira daliil u ah in Apple ayaa ka soo horjeeda in codsiyada faraha la qoondaynta xasuusta. Tani waa sababta app this gaar ah ayaa ka maqnaa muddo ah waxaa inta badan dib u bilaabay.
3. Clear Safari Data iyo Kukiyada
La baneeyo xogta Safari iyo cookies aad kor u xoreyn doono qaar ka mid ah xusuusta oo halkan ka soo dedejin aad iPhone. Fur app goobaha iyo hoos u dhaqaaq Safari. Halkan, dooran Clear History iyo Kukiyada oo cad iyo Data.
Waxaa jira laba khasaaraha la isticmaalayo nidaamka this. Mid ka mid ah waa in Safari mar dambe ma soo jeedin doonaa URLs in aad haddii aan bookmarked. Kale waa in nadiifinta xogta oo dhan ka dhigan tahay in website-ka illoobi maayo aad door bidayso.
4. leexo Down Graphics
Waxay u badan tahay in saamaynta muuqaal ah fanaaniinta cusub in la iman aad 6s iPhone cusub (Plus) ee keeni karaya in ay yarayso. Sidaas daraaddeed taasu waxay u badan tahay waa fikrad wanaagsan in la diidi naqshadeynta ah. Si aad u dami mooshin, garaac Settings> General> Helitaanka> yaree Codsiga iyo markaas dhigay button yareeyo mooshinka ku saabsan.
Waxaad sidoo kale kordhin kartaa ka duwan. Tubada on Settings> General> Helitaanka> Kordhi ka duwan, oo dabadeed la yareeyo Transparency si on. Tani waxay sidoo kale gab doonaa saamaynta asalka.
Arintanina kordhin kartaa ka iPhone ee xawaaraha waxoogaa yar by laakiin waxa ay si fiican u shaqaynayaan si ay u kordhiyaan halkii aad nolosha batteriga.
5. Isticmaal Wondershare SafeEraser
Isticmaal SafeEraser Wondershare waa mid ka mid ah fudud iyo inta badan wax ku ool ah siyaabaha ay u nadiifiyaan aad iPhone iyo halkan u dardar. Codsigan isticmaalaa Creech US Military ee technology ugu danbeeyay ka badan-qoraal la moodo xogta tirtiray unrecoverable. Qaar ka mid ah qaababka ay ka mid ah;
Codsiga waxaa si joogto ah masixi kartaa iPhone si ay u fududaato in aad iibiso ama dib u qalab aad oo aan ka werwerayn ku saabsan macluumaadka shakhsiga ah helitaanka gacmo qaldan
Waxaa kuu saamaxayaa inaad saarto faylasha tirtiray si joogto ah oon la abuuro badan oo boos disk lacag la'aan ah.
1-Guji Nadiifi feature hubisaa in qalab aad waddaa xawaare aan fiicnayn iyadoo la fogeynayo files junk iyo geedi socodka soo jeeda oo aan loo baahnayn si ammaan ah.
Tallaabada Koowaad: Download iyo rakib SafeEraser Wondershare si aad u computer. Orod barnaamijka ka dibna xiriiriyaan iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB.
Barnaamijku waxa uu bilaabi doonaa baar qalab aad si toos ah.
Tallaabada Labaad: Marka scan ku dhamaato. Files junk ayaa lagu soo bandhigi doonaa oo waxaad riixi kartaa "Nadiifinta" oo bilaash ah ilaa qalab aad.
Geedi socodka qaadan kartaa in muddo ah si loo hubiyo in si aad telefoonka ku xiran computer sida ay ilaa nadiifiyaa.
Talaabada Sadexaad: Marka geedi socodku waa dhameystiran, barnaamijka wuxuu muujin doonaa warbixin ku saabsan meesha bannaan ee la heli karo iyo sida loo qoondeeyay aad iPhone.
Waxaad markaa dooran kartaa in aad rescan haddii aad rabto in aad nadiifinta badan oo dhamaystiran ama guji guriga inay dib u furmo suuqa weyn ee tago.
Sida loo hagaagsan Google Xiriirada iyo Kalandarada la iPhone
> Resource > iPhone > Talooyin fiican in ay 6s iPhone Your (Plus) sida ugu fiican ee New